के मानवता हराउदै गएको हो त ? मोटरसाइकल दुर्घटनाका घाइतेलाई सहयोग हैन सेल्फी हान्नमा व्यस्त – Todays Nepal
के मानवता हराउदै गएको हो त ? मोटरसाइकल दुर्घटनाका घाइतेलाई सहयोग हैन सेल्फी हान्नमा व्यस्त
दुर्घटना देखे पछि सामान्यतया हरेक घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउन तिर लाग्छौं। तर भारतमा भने अजिव घटना घटेको छ। मोटरसाइकल दुर्घटना पछि घाइते भएका एक व्यक्तिलाई अस्पताल नपठाई केही व्यक्तिहरुले भारतमा भिडियो साथै सल्फी खिचेका छन्। भारतको राजस्थानमा भएको सडक दुर्घटनामा परि तिनको मृत्यु भएको समाचार आएको छ। दुर्घटनामा परि परमानन्द उमेर २७ वर्ष , गेमाराम उमेर ३० वर्ष र चांदराम उमेर ३० वर्ष मृत्यु भएको भारतीय संचार माध्यमहरुले समाचार छापेका छन्।
तिन जना सवार उक्त मोटरसाइकल एक स्कूल बससँग ठोकिन पुगेको थियो। यस दुर्घटनामा परमानन्दको घटनास्थलमानै मृत्यु भएता पनि अन्य दुई भने अस्पताल लगिने क्रममा मृत्यु भएको थियो। दुर्घटना हुने बितिकै यी दुईलाई अस्पताल लग्न सकिएको भए ज्यान बच्न सक्ने चिकित्सकको भनाइ रहेको छ।
दुर्घटनामा परि घाइते भएका ती दुई युवक सहयोगको लागि याचना गरिरहेता पनि केही व्यक्ति भने भिडियो बनाउन र सेल्फी खिच्नमानै व्यस्त भए। रगतमा लथपथ भएका दूई जना पिडाका कारण कराईरहेता पनि त्यहाँ उपस्थिति व्यक्तिहरुले समयमा उद्धार गरि अस्पताल पुर्याएको भए दुई जनाकोनै ज्यान बच्नसक्ने थियो।
उक्त घटनास्थलमा तस्विर खिच्ने व्यक्तिहरुका तस्विर भारतीय सामाजिक संन्जलामा भाइरलनै बनेको छ। सामाजिक संजालमा ती व्यक्तिहरुको तिब्र आलोचना पनि भएको देख्न सकिन्छ। कहिले यसलाई अमानवीय प्रबृत्ति भनेर टिप्पणी समेत गरेका छन् ।